अण्डा खान जान्नुभयो भने सुगर, कलेजोको रोग लाग्न नदिने मात्र हैन थप यस्ता ७ फाइदा हुनेछन् -सेयर गरौ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २६ पुष २०७५, बिहीबार १२:०० लेखक नेपाली जनता
गर्भवती अवस्थामा अन्डा खाँदा बच्चाको शारीरिक विकाशका साथै मानसिक विकाशमा सहयोग पुग्छ ।
अन्डामा पाइने फोलिक एसिड र कोलिनले बच्चाको मस्तिष्क विकासमा मद्दत गर्छ ।
अन्डामा पाइने लिउटिन र जियाज्यानथिन भन्ने तत्वले उमेर बढ्दै जाँदा गुम्ने आँखाको शक्तिलाई बचाउन सहायता गर्छ ।
अन्डाको उचित मात्रामा सेवान गर्नाले मोटोपनालाई कम गर्न सकिन्छ । किनकि, मोटोपना धेरै रोगको कारण हो ।
अन्डामा पाइने भिटामिन तथा खनिज तत्वहरुले हाम्रो छालालाई कसिलो तथा चम्किलो बनाउने काम गर्छ ।
अन्डाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि वृद्धि गर्छ ।
अन्डामा पाइने भिटामिन डी तथा फस्फोरसले हड्डी र दाँतलाई मज्बुत बनाउन मद्दत गर्छ ।
गौशाला । महोत्तरी जिल्लामा छ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका सात हजार बढी बालबालिका कुपोषणको शिकार भएका छन् ।
राेबाेटले गर्छ बैंककाे सबै काम तमाम, अब मानिस के काम ?
एजेन्सी । चीनमा अब बैंककाे सारा काम राेबाेटले गर्ने भएकाे छ । सरकारी स्वामित्वको एउटा कंस्ट्क्शन बैंकले बैंकिङ कार्यका…
लुकिछिपी डाक्टरी ! बिजनेस भिसामा काम गर्नु गैरकानुनी
काठमाडौं । तनहुँको दमौली र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा उत्तर कोरियाली चिकित्सकले अवैध रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको पाइएको छ ।
उत्तर कोरियाली नागरिकबाटै…